Faiba glaasi ala Blinds Fabric Manufacturers & Suppliers - China faiba glaasi ala Blinds Fabric Factory
Ugboro abụọ ala Blinds faiba glaasi Blackout Fabric
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke 40% faiba glaasi na 60% ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. Ọ naghị agbasa ahụ siri ike na ikuku ma ghara ịgbaso ntụ, nke nwere ike belata oke ájá. Na mgbakwunye Ọ bụ mineral nkịtị na anaghị enye gburugburu ebe obibi nje bacteria. Nje bacteria enweghị ike mụta nwa na akwa ahụ agaghị akpụzi. A na-eji ya eme ihe na ndụ anyị. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọha (ụlọ mmega ahụ, nnukwu ihe nkiri, ọdụ ụgbọ elu, ebe ngosi), ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelụ, ụlọ oriri na ọ guestụ ,ụ, mgbatị ahụ, ụlọ nzukọ na ụlọ (ime ụlọ, ime ụlọ ọmụmụ, ime ụlọ, ime ụlọ ịwụ, kichin, ime ụlọ anyanwụ , mbara ihu).
Oke kachasị n'obosara anyị na-eme bụ 3m. Na ọkpụrụkpụ bụ banyere 0.38mm. Ogologo faiba glaasi blackout ákwà bụ 30mper mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike.
Eco-friendly Antibacterial Blackout Faiba glaasi Fabric N'ihi ala Blinds
A na-eji akwa fiberglass na-acha uhie uhie mee 40% fiberglass na 60% PVC site na usoro pụrụ iche. Enweghi ọla dị arọ na ihe na-emerụ ahụ, nchekwa na mmekọrịta enyi na enyi, enweghị isi ọwụwa, enweghị mmerụ ahụ mmadụ, nkwụsi ike dị elu, mara mma ma mara mma, na ịcha agba dịkwa mma maka ịchọ mma nke oge a. Ọ na-ọtụtụ-eji dị iche iche na gburugburu ebe obibi, dị ka ụlọ ọrụ, nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na n'ụlọ.
Ogologo nke fiberglass fabric bụ 30m kwa mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike. Ekwesịrị ime ule nyocha tupu ebupu ya.
Eco-friendly faiba glaasi Fabric 100% Blackout N'ihi Home
A na-eji akwa fiberglass na-acha uhie uhie mee 40% fiberglass na 60% PVC site na usoro pụrụ iche. Ọ na-eguzogide ọgwụ dị iche iche dị ka acid na alkali; ya na nguzogide oria nká na nguzogide ihu igwe; na-abụghị hygroscopic, hydrophobic na mmiri na-eguzogide; ike mgbatị ume; uzuzu uzuzu, mgbochi combustion, mgbochi static, mgbochi ultraviolet; ọnụọgụ nke mgbasa na mgbatị ọkụ bụ obere, ezigbo ikuku permeability, ezigbo agba ngwa ngwa, ezi akụkụ kwụsie ike, ọdịdị mara mma, ọ naghị adị mfe mmeru, dị mfe ihicha, enweghị nrụrụ mgbe ị sachara, na-adịgide adịgide. Ogologo nke blackout faiba glaasi akwa bụ 30mper mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike.
Ire ọkụ retardant faiba glaasi Blackout Fabric 2m Obosara
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke 40% faiba glaasi na 60% ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. Ọ nwere ire ọkụ retardant Njirimara ahụghị na ndị ọzọ na akwa. Ezigbo akwa fiberglass agaghị emebi ma ọ bụ carbonized n'ihi na ọkpụkpụ dị n'ime nke akwa ahụ bụ eriri iko mgbe ọkụ. Ngwongwo nke akwa ahụ n'onwe ya na-ekpebi na ọ gaghị edozi ya ma na-echekwa mbadamba ogologo oge. Enweghị mpempe akwụkwọ, mmụba na mgbatị <0.5%. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dịghị mkpa ka ume, eke adọka eguzogide, na ịrịba ifufe na-eguzogide na n'ibu Njirimara idi Ugboro ojiji.
High Quality Anti-UV PVC Mgbochi Faiba glaasi Blackout Fabric
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke 40% faiba glaasi na 60% ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. Ọ naghị agbasa ahụ siri ike na ikuku ma ghara ịgbaso ntụ, nke nwere ike belata oke ájá. Na mgbakwunye Ọ bụ mineral nkịtị na anaghị enye gburugburu ebe obibi nje bacteria. Nje bacteria enweghị ike mụta nwa na akwa ahụ agaghị akpụzi. Ọ na-ọtụtụ-eji dị iche iche na gburugburu ebe obibi, dị ka ụlọ ọrụ, nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ.
Oke kachasị n'obosara anyị na-eme bụ 3m na ọkpụrụkpụ bụ ihe dịka 0.38mm. Ogologo faiba glaasi blackout ákwà bụ 30mper mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike.
Kasị Popular Window Blinds faiba glaasi Blackout Fabric
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke 40% faiba glaasi na 60% ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. N'ime ogologo oge anwụ na-acha, agba ọsọ ọsọ nke akwa kwesịrị iru otu ụkpụrụ iji gbochie akwa ahụ ịla n'iyi. Maka ngwaahịa nwere nrụgide doro anya ma ọ bụ ihe ịchọrọ, ọ dị mkpa ịtụle ike mgbatị nke akwa ahụ. Dịka ọmụmaatụ, nnukwu ihe mkpuchi dị elu na ụlọ ọha na ụlọ na ákwà mgbochi dị elu nwere oke ike kwesịrị iji akwa fiberglass.
N'okpuru ọnọdụ ndị a, fiberglass blackout fabric bụ nhọrọ zuru oke, ọ bụghị naanị nwere ike ichedo nzuzo, kamakwa gburugburu ebe obibi enyi na enyi.
Top Quality ịkwanyere ntekwasa faiba glaasi Blackout Fabric N'ihi Office
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke faiba glaasi na ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. Enweghi ọla dị arọ na ihe na-emerụ ahụ, nchekwa na mmekọrịta enyi na enyi, enweghị isi ọwụwa, enweghị mmerụ ahụ mmadụ, nkwụsi ike dị elu, mara mma ma mara mma, na ịcha agba dịkwa mma maka ịchọ mma nke oge a.
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke eke mineral (quartz, ájá, soda, wayo). Ọ na-ọtụtụ-eji dị iche iche na gburugburu ebe obibi, dị ka ụlọ ọrụ, nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na n'ụlọ. Ihe mejupụtara nke fiberglass blackout akwa bụ 40% faiba glaasi na 60% ịkwanyere, atọ n'ígwé PVC na 1 oyi akwa nke faiba glaasi. Oke kachasị n'obosara anyị na-eme bụ 3m na ọkpụrụkpụ bụ ihe dịka 0.38mm. Ogologo faiba glaasi blackout ákwà bụ 30mper mpịakọta.
UV Chebe Blackout faiba glaasi Fabric 40% faiba glaasi Na 60% ịkwanyere
Glass fiber bụ inorganic na-abụghị nke nwere ihe nwere ezigbo arụmọrụ yana akụkụ dị mkpa nke fiberglass sunscreen akwa. Ihe ndi ozo bu silica, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide na ihe ndi ozo.
Blackout faiba glaasi mere nke eke mineral (quartz, ájá, soda, wayo). Ọ na-ọtụtụ-eji dị iche iche na gburugburu ebe obibi, dị ka ụlọ ọrụ, nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na n'ụlọ. Ogologo nke blackout faiba glaasi akwa bụ 30mper mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike. Oke kachasị n'obosara anyị na-eme bụ 3m na ọkpụrụkpụ bụ ihe dịka 0.38mm.
Vetikal Blinds Faiba glaasi Blackout Fabric N'ihi Home
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke faiba glaasi na ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. Ọ naghị agbasa ahụ siri ike na ikuku ma ghara ịgbaso ntụ, nke nwere ike belata oke ájá. O nwekwara ike igbochi ìhè anyanwụ na ụzarị ọkụ, nke bara uru na ahụike. O kwesịrị ekwesị maka ụlọ nkwari akụ, ụlọ, ụlọ obibi ndị dị elu, ebe ntụrụndụ, wdg.
Ogologo faiba glaasi blackout ákwà bụ 30mper mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike. Oke kachasị n'obosara anyị na-eme bụ 3m. Na ọkpụrụkpụ bụ banyere 0.38mm.
Waterproof Mpụga Blinds faiba glaasi Blackout Fabric
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke 40% faiba glaasi na 60% ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. A na-eji ya eme ihe na ndụ anyị. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọha (ụlọ mmega ahụ, nnukwu ihe nkiri, ọdụ ụgbọ elu, ebe ngosi), ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelụ, ụlọ oriri na ọ guestụ ,ụ, mgbatị ahụ, ụlọ nzukọ na ụlọ (ime ụlọ, ime ụlọ ọmụmụ, ime ụlọ, ime ụlọ ịwụ, kichin, ime ụlọ anyanwụ , mbara ihu). Ọ mejupụtara atọ n'ígwé PVC na 1 oyi akwa nke faiba glaasi.
Waterproof faiba glaasi Blackout Fabric N'ihi Office
Faiba glaasi blackout ákwà ka nke 40% faiba glaasi na 60% ịkwanyere site a pụrụ iche usoro. Ọ nwere ire ọkụ retardant Njirimara ahụghị na ndị ọzọ na akwa. Ezigbo akwa fiberglass agaghị emebi ma ọ bụ carbonized n'ihi na ọkpụkpụ dị n'ime nke akwa ahụ bụ eriri iko mgbe ọkụ. A na-eji ya eme ihe na ndụ anyị. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọha, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, họtel na ụlọ.
Faiba glaasi blackout ákwà ekewet na atọ n'ígwé PVC na 1 oyi akwa nke faiba glaasi.The kacha obosara anyị na-eme bụ 3m. Na ọkpụrụkpụ bụ banyere 0.38mm. E nwere ihe karịrị 100 dị iche iche na agba maka blinds emepụta.The ogologo nke faiba glaasi blackout ákwà bụ 30mper mpịakọta. Mpịakọta ọ bụla juru n’ime akpa akwụkwọ siri ike.
Waterproof faiba glaasi ala Blinds Blackout Fabric 3m Obosara